वाह ! हिउ पर्यो फुरुरु………….
पाँचथर । पाँचथरको पर्यटकीयस्थल पौवाभञ्याङको आसपासका डाँडामा आज बिहानैदेखि हिउँ पर्न शुरु भएको छ । वर्षासँगै हिमपात भएपछि हिउँ हेर्नेहरू डाँडामा पुगेका छन् । फुरुरु हिउँ परेको दृश्य हेर्नेहरूको चहलपहल बढेको स्थानिय तासी शेर्पाले जानकारी दिएका छन् ।
वर्षा र हिउँको चिसो छल्दै डाँडामा पुगेका आन्तरिक पर्यटकले हिउँ खेलिरहेका छन् ।
पौवाभञ्याङको यो वर्षको पहिलो पटक हिमपात भएको हो । हिउँ डाँडामा बाक्लै जम्मा भइसकेको र हिउ बस्ति सम्म आईपुगेको छ । पौवाभञ्याङक्षेत्र लगाएत उच्च पहाडी क्षेत्र आसपासमा हिउँले सेताम्य बनाएको छ । पाँचथरका बिभिन्न क्षेत्र सुकेपोखरी, गोरुबाले, साधुटार, छिन्तापु, चारराते, फालोट,चिवाभञ्याङ लगाएतका क्षेत्रमा बाक्लो हिमपात भएको छ ।
उपत्यकासहित अधिकांश स्थानमा पानी परेको छ । अग्ला भूभागहरुमा हिउँ पनि परेको छ । त्यसैले आज अघिल्लो दिनको तुलनामा चिसो बढेको महसुस भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिनभर नै बादल लाग्ने छ । ‘पानी पर्ने र रोकिने क्रम आज दिनभर नै जारी रहन्छ,’ महाशाखाकी मौसमविद गंगा नगरकोटीले भनिन् । बिहीबारबाट भने सुदूरपश्चिमबाट मौसम खुल्दै जाने महाशाखाको पूर्वानुमान छ ।